Ukutya kwimihla nganye yepipi ye-chips kunyaka wonke kuya kufana nokulingana kweelitha ezintlanu zeoli. Oogqirha base-USA kunye ne-Great Britain banikezela ubungqina obuninzi bokuthi i-snack ingabangela ukukhuluphala kunye nesifo senhliziyo, kubangele iingxaki ngokuphuhliswa komntwana kumama ozayo, ukuxhatshazwa kwabantwana, ukukhupha ukuphuhliswa komhlaza kubantu abadala. Ngenxa yoko, ukuqwalaselwa ngokucokisekileyo kunikwe imfuno yokubhala kwiiphakheji zeepps ezifana nesilumkiso malunga neengozi zokutshaya kwiipakethi zerigarethi.
Kuya kwenzeka ukuhleka kwesi sihlomelo, ukuba kungengenxa yeemeko eziphazamisayo eziye zaveliswa ngokubhekiselele kumkhwa owandayo wokukhupha "ukunyuka". Ngokomzekelo, e-UK, owesithathu wabantwana badla iichips imihla ngemihla, i-sibini yesithathu esele isetyenziswe kuzo eziliqela ngeveki. Kwaye ngokubanzi, iBritish igqiba iipakethi eziyiebhiliyoni ezintandathu ngonyaka, ehambelana neetani enye yeepipi nganye ngomzuzu okanye malunga neepakethi eziyi-100 ngomntu ngamnye. I-sacku ekhankanywe ngokuthi "perekuson" ngosuku - njengabantwana abaninzi baseBrithani enkulu ngoku bafumana i-receipt eyongezelelweyo yokutya kwabo amahlanu amalitha eoli yemifino ngonyaka. Oku kakade kungathethi malunga neoli, ushukela kunye netyuwa, ezikwazo ezingabamsulwa ngohlobo lweepakethi eziye zazalisa ieshefu zecala ekhoneni, ivenkile okanye isiteshini segesi.
Ukusebenzisa iingcebiso zenzululwazi kunye nabathengisi, ezinye iinkampani ezinkulu zokukhiqiza, ngaphezu kweentlobo ezinomdla kunye nemibala eqaqambileyo, isebenzise rhoqo kwaye iphucule iindlela zokuthintela i-taste buds, ngokuyibeka ngokoqobo kwi-"depend-dependence".
Umdla wesondlo uMichael Moss uhlalutye iziphumo "zezinto ezilungileyo" zokudla izilwanyana ngamashumi ambalwa eminyaka kwaye wabonisa indlela i-chips esivela ngayo i-snacks elingelayo i-70 ans yaba yinto efana nebhobho yengqondo echaphazela ngokuchanekileyo amaziko athile eengqondo zethu ngoncedo lwe-chemistry "yesifiso esinomdla" sale mveliso . Ezinye izakhi zeekhemikhali ezenza isityuwa, i-fat and sugar, ebizwa ngokuthi "i-taste enhancerers", yenza isantya sezintlu ezingasentla kunye nasemlonyeni. Ukusuka kuyo ulwazi luthunyelwa ngqo kwingqondo. Le ndlela emfutshane yenza ukuba kube lula ukukhetha amanqanaba afanelekileyo kwisithako ngasinye kwimveliso eluhlaza. Amavolontiya aqeshiweyo ahlolisise umkhiqizo ukunambitha, ukuvumba kunye nezinye iimvakalelo. Umlinganiselo ofanelekileyo weetyuwa, amafutha eswekile (aqulethwe kwisitashi) athumela iimpawu zokuzonwabisa kwiingqondo, esithi inqaku lokuzonwabisa liyabanjwa. UDkt. Moss ugxeka ukuba kukho ukulangazelela ukulungelelaniswa kwezi nxalenye ngengqondo, kwaye akunakwenzeka ukuxhathisa oku. Ngaphezu koko, le meko ifana nezidakamizwa: xa sisidla ukutya okunjalo, kunzima ngakumbi ukufumana ingqondo yethu emva kokuyidla, esenza sidle ezo "zinyango" ngakumbi. Njengoko izilwanyana eziluthayo zifuna ukufumana i-dose, ngoko "i-chip depend dependent" iya kufuna ukutya kwayo.
Ngubani obengacinga ukuba i-chip-cracking iyalinga kangaka ngenxa yokuba "i-crunchiness" yayo yenzululwazi? Kwaye ingqwalasela yabathengisi beekhonkco sele ingqalelo kule nto. UDkt. Moss uthi ikhefu lekhefu elifanelekileyo lichazwe. Ingongoma kukuba i-chiwed cheps iyakuthandeka kakhulu kwivalelo xa iimfele zixhaswa ngumkhosi wama-4 iipounds ngeesentimitha nganye.
Ileta ethi "Gourmet" (gourmet) kwiphakethi kunye nemveliso ivuselela inzala kuyo. Yaye ukuba uthe wadla ngokutya, akuyikrele, nokuba uyazi ukuba izithako zomntu ziyingozi. Konke oku kuchazwa ngothando lwethu lweetchips.
Sihlawula impilo yethu ngokungaqiniseki. Ukusetyenziswa kakubi kwee-chips, oko kukuthi, ukusetyenziswa kwamafutha amaninzi, ushukela kunye netyuwa, kwandisa umngcipheko wokukhuluphala, uxinzelelo lwegazi, isifo sikashukela, isifo senhliziyo, umhlaza. Abantwana baqinisekiswa oku kuhlahloka kwezempilo. Ngaphezu koko, isayensi sele ifumene ezinye izisongelo ezikhohlisayo ezivela kwiipipi. Ngokwezifundo ezenziwa e-US nase-UK, i-cardiologist kunye nesondlo sezondlo uDariush Mozaffarian (uDariush Mozaffarian) uxela ukuba ii-chips zizona zigalelo kakhulu kwi-epidemic of fatness in the US. Umxholo we-caloric wezinto zokutya uhlukile, iimveliso zepatata ziphezulu, ngakumbi kwiipipi zepatata. Ngenxa yokufikelela kwabo kunye nemikhwa yondlo, i-knick isetyenziselwa, ifuna ukuyidla ngakumbi nangaphezulu. Izifundo zezondlo zeZiko lezeMpilo zeHarvard zizimisele ukuba kwiinqwelo zanamhlanje izinga le-starch kunye ne-carbohydrate ecocekileyo liphezulu kakhulu kangangokuba enye ibhegi enye ingaphinda iphule i-balance balance of glucose kunye ne-insulin egazini lethu. Ukungalingani okunjalo kunciphisa umvakalelo wokutya, kwandisa indlala, okukhokelela ekunyuseni kwindleko yokutya ngexesha ngemini. Kuba nzima ukutya esinye isikhwama, kuba iziqendu zincinci. Inqanaba eliphezulu le-insulin likhokelela kwesikhumba nesifo sikashukela.
Nangona zonke iingxaki ezinxulumene nokusetyenziswa ngokugqithiseleyo, iindlela zokuthintela abantwana-abathengi abakhulu be-chipsons - bayamangalisa kwaye banengqondo. Ngombulelo wokutsala amabhanti amadumo, kunokwenzeka ukuba ubambelele ubuncinci buntwini phantsi kwempembelelo yokuxhomekeka kwe-chip ". Xa i-cartoon iphazamisekile eNgilani ngenxa yokuthengisa, apho isithixo sezilwanyana ezinesiNgesi uGary Lineker sidumisa iichips "Abahambahambayo", akungathandabuzeki ukuba ngomso ezi ngxowa ziya kutshabalala. I-Idol yabalandeli bebhola bebhola leLeel Messi kwi-adware, efakwe kwizitrato zaso nasiphi na isixeko esikhulu kwilizwekazikazi zonke, kunye nohlobo lokulungele ukugcina isikhwama se "Lays". Unokuma njani apho? Ingqungquthela yokunyanya kwamanzi kumazwe amaninzi iya kukhula, ngoko ke iifowuni zivakala ngokukhawuleza zengqondo ejongene nokujongana nemveliso yokutya.
Asifanele sikhohlwe malunga noxanduva lwabazali abazikhuphayo ngokunyanzeliswa kwabantwana babo ngama-chips. Ukuqokelela umntwana kwasekuseni esikolweni, kuphela omnye oomama abayishumi abafaka isikhwama sesidlo esiphekwe esisezantsi kwisitshixo. Abanye banqwenela ukuthulula iimveliso ze-confectionery kwixesha lesidlo sabafundi babo okanye ... ewe, ezo ziphulo ezifanayo. Oogqirha banenkxalabo yokuba ukususela ebuntwaneni, abantwana "bahlala phantsi" kwimveliso enjalo. Emva koko, enyanisweni, bayatsalwa ngabangewona amakhadibhodi, kunye neentlanzi zokuvelisa kunye nefuthe lokunambitheka eziqukethe i-acrylamide kunye ne-sodium glutamate. Ezi zongezi zeekhemikhali zingabangela ukuba utshintsho olungenakuguquka kumzimba omncinci, oza kuba kamva ube zizifo ezibi kakhulu.
Iipropati eziwusizo zeerberberries
IiJaji: inzuzo okanye ingozi?
Iimpawu ezinobungozi neziyingozi ze-yogurt
I-Adyghe ushizi inzuzo
Ukunyamekwa kweLil kunye nezilwanyana zabantu
Indlela yokuphumelela ukutshata nomfokazi
Iintlobo zemiba eyahlukileyo yobudlelwane obusondeleyo
USergei Bodrov namhlanje uya kuba neminyaka engama-45 ubudala
Maxim Galkin ngokukhawuleza esibhedlele